Ngaba ndiyakuvuyisana nomntu owayengumfana wakhe ngosuku lokuzalwa kwakhe?
Xa ubuhlobo phakathi kwabantu buphela, kukho imininzi imibuzo ephathelene nokuziphatha kwesigxina sakhe sokuqala. Ngaba ndimele ndithi, ndimele ndixelele ukuba udibana nekhampani enye, ufuna ukuvuyisana nomntu owayengumfana wakhe ngosuku lokuzalwa kwakhe?
Ewe, kwindawo yokuqala, konke kuxhomekeke kwindlela oye waphula ngayo. Ukuba ukuhlukana kwadlulile kunye nekrakra, ukuthokoza kufuneka kushiywe nawe. Zigweba wena, ukuba uyamyeka umfana, umcaphukise ngale nto, ngoko kuya kukhangeleka njani? Kukho iindlela ezimbalwa. Okokuqala - uya kuthatha njengento yokuhlekisa, iimoya yakhe iya kuhlahloka, uya kubhala inkulumo evuthayo kunye neentsimbi ezikude kunye neeholide yakhe iya kupheliswa.
Inketho ezimbini - indoda encinci iya kucinga ukuba oku kuthetha into kwaye iimvakalelo zakho azidluli. Kule meko, uya kuphinda afune ithuba lokudibana kunye nokuseka ubudlelwane, kwaye oku akunakudingi.
Cinga imeko echasene nayo - loo mfana waphonsa kwaye wakuhlambalaza. Kule meko, ukuthokoza okunjalo kuya kuthathwa njengento ehlazo. Ngokuqinisekileyo uya kubonakalisa kubo bonke abahlobo bakhe, bengakulibali i-sarcastically bathi wena, isisidenge sithandana nothando, ongasakwazi ukuhlala ngaphandle kobukumkani bakhe.
Yinto enye into xa ulwahlula, ngoko kuthetha, ngokufanelekileyo. Phakathi kwakho bekungekho mpikiswano kunye neentlanzi. Kulula nje, kwafika ixesha apho bobabini babona ukuba iimvakalelo zacinywa kwaye ukuba kwakungekho ncamango yokuqhubeka nobudlelwane. Kwimeko enjalo, unokuvuyisana nomfana osele holide yokuzalwa kwakhe. Kodwa ke uzama ukuvuyisa isandi esinyanisekileyo, kodwa singathathi hlangothi. Akuyimfuneko ukusebenzisa i-petting ehlukeneyo kunye nokunciphisa unyango, kuba insizwa inokuyichaza ngokungahambi kakuhle kwaye ucinge ukuba uye waphinda wamisa iimvakalelo kuye.
Ukuba uyazi ukuba umntu owayengumfana unomfana onomona ohlala ekhumbuza ngawe, ngoko unconywa kufuneka ulibale. Nguwe kwaye uyaqonda ukuba isithuba esedlulileyo esidlulileyo, kwaye ukubingelela okunjalo ngumrhumo kumntu onokusikhumbuza. Intombi yakhe ayifuni ukuqonda nokuqonda oku. Ngako oko, i-boyfriend yakho yangaphambili iqinisekisiwe: umhla wokuphangwa, ukuhlambalaza, i-hysteric kunye nezitya eziphukileyo. Futhi musa ukucinga ukuba akayi kuqaphela i-SMS okanye umyalezo woqhagamshelwano naye. La mabhinqa ahlole yonke into kunye naphi. Yingakho umkhumbule nje ngosuku lwakhe lokuzalwa kwaye ufune ngengqondo. Abantu banomuva onamandla, nangona bengenakukubona okanye bakuva.
Ewe, ukuba ugcina ubudlelwane obusondeleyo kunye nomntu owayengumfana, ngokwemvelo, akukho mbuzo malunga nayiphi na imiba. Ndicinga ukuba uya kukumema ukuba ube ngumthendeleko, kwaye awuyi kumncoma kuphela, kodwa unika nesipho esithakazelisayo. Ngokuqinisekileyo, olu khetho luyithandwa kakhulu, kodwa, ngelanga, kukho izibini ezinjalo ezinokuqonda ukuba ubuhlobo phakathi kwabo bukhulu kunentukuthelo, inzondo nokungaqondi.
Kodwa kukho ezinye iimeko. Kwaye omnye wabo nguyena xa, emva kokuhlukana, le ntombazana iyaqonda ukuba isayithanda umfana wayo owayengumfana. Indlela yokujongana nale meko? Okokuqala, kufuneka uhlale wazi ukuba unentombi entsha yentliziyo kunye nendlela ekuphatha ngayo. Naluphi na uvakalelo olunamandla, akufanele uhlazise kwaye uzienze ungenangqiqo. Ngokuqinisekileyo, usuku lokuzalwa luhlobo oluhle kunye nekhefu elivulekileyo, elinokuthi libe sisizathu sokuxolelana. Kodwa, kuyimfuneko ukwazi kakuhle ukuba ngaba ukuxolelana kukwenene ngokwenene. Ngoko ke, ngaphambi kokuba usebenzise ukubingelela njengesizathu sokufumana isizathu, fumana ukuba ngabazi ukuba izinto zimi njani. Ukuba akayithandi kwaye akafumananga umfazi onoyolo - unokuthatha ithuba.
Kwimeko apho, ukuvuyiswa kwakho kufuneka kube nemvakalelo ngokwaneleyo, kodwa kungekhona kakhulu. Awazi ukuba unayo nayiphi na imvakalelo. Ukuba azinjalo, ngoko uya kukhangela ubuqhetseba phambi kwekwenu. Ekubeni uyamazi kakuhle, sebenzisa amagama kunye neengongoma ezinokumbamba, zikukhumbuze ngexesha elidlulileyo, ngezihlandlo ezimnandi. Kuvuyisana nanobuqotho, kodwa ungamhlangabezi, zithobe kwaye ubonise ukuba nguye owona mhle kwihlabathi kwaye ulungele ukwenza konke. Ndikholelwe, nangamazwi aqhelekileyo okubongela, unokubamba kalula loo mxholo xa ubeka khona. Ngoko uzama ukudibanisa iimvakalelo zakho, nokuba ngaba kunzima kuwe ukwenza loo nto. Umfana kufuneka aqonde ukuba ufuna ukuphinda uqhagamshelane naye, kodwa awuyi kwenza konke okusemandleni kwaye akunakwenzeka kule nto. Ukuba awunamdla kuye, uya kuphendula ngokuvuyisana kwaye uya kuqalisa ingxoxo, kwaye kukho konke kuxhomekeke kuwe. Ukuba kukho ubuncinane amalahle, iyakwazi ukuguqulwa ibe ngumlilo.
Kuthekani ukuba uthe wamgxotha umfana, kwaye ngoku uyaqonda ukuba ungeyonto? Kule meko, imihla yokuzalwa ingasetyenziswa njengesizathu sokuxolelana. Kodwa kuloo nto, kungcono ukuba ungabhali, kodwa ukubiza. Oku, kunene, kuyatshisa, kuba kukho njalo ukuba kungenzeka ukuba akayi kuthatha ifowuni. Kodwa ufanele uvavanyo. Ukuba umfana usakhuluma nawe, mncoma, ubeke zonke iimvakalelo ngala magama, uze ucele uxolo, uchaze ukuba ungeyonto kwaye uyamthanda. Musa ukumbuza malunga nentlanganiso, cinezela, vele unike ukutya okucingayo. Makuqonde into endiyithandayo, kwaye uqaphele zonke iimpazamo zakho.
Ukuba uyaqonda ukuba uyazisola ngokwenene kwaye unayo iimvakalelo, mhlawumbi uya kuba nako ukwenza. Ngosuku lokuzalwa, sonke sithatha umncinane. Ngoko ke, unethuba lokufikelela kuye, ngenxa yokuguquka kwakho.
Kodwa, ukuba umfana akayifumananga ifowuni, uya kuthi, ungabhala kuye, nangona, mhlawumbi, umphumo uya kuba yinto efanayo. Kule meko, ufanele ufikelele kwisigqibo sokuba ulahlekelwe kwaye kufuneka uqhubeke uhlala, ufikelele kwizigqibo zakho kwiimpazamo zakho. Kwaye ukuba ngaba kuyimfuneko ukuzama ukuvuyela ngokuphindaphindiweyo inkwenkwe yangaphambili yokuzalwa, uNyaka omtsha kunye nezinye ieholide, ukuba akafuni ukukubona ebomini bakhe? Ndicinga ukuba akufanelekile. Musa ukuchitha ixesha elixabisekileyo kumntu ongafuni ukwabelana nawe ngeli xesha.
Kutheni umntu efuna ukutshata?
Ngaba ndingatshata nomfana ozinike ngo-15?
Injongo yegama elithi Stanislav
Indlela yokwenza umntu abe nemfundo ephakamileyo?
Kutheni abafana bengathandi ukusindiswa?
Ukukhawuleza kwimihla yeentsuku ezili-10: kuthini ukuba ungakhulelwa?
Iibhoksi ze-zucchini ezibhaka
I-Potato casserole kwi-cabinet ye-steam
Indlela yokukhetha i-dishwasher kunye nento ozakujonga ngayo
Ngaba i-mycoplasmosis iyingozi ngexesha lokukhulelwa?
Inyama e Uzbek
Indlela yokuhlambulula ibhegi yesikhumba?
Iengulube zeengulube ezinamafutha
Imidaniso ye-gypsy ebomvu kunye nemibala
UDima Bilan ushintshile ngokuphawulekayo, ifoto
Isobho seTatato kunye nompu
Indlela yokukhetha i-wheelchair ilungelo lomntwana
Indlela engqondweni echaphazela ngayo impilo yabantu